Tanisao ny kinova Solus 4.1 vaovao miaraka amin'i Kernel 5.4 ary bebe kokoa | Avy amin'ny Linux
Ny fanombohana ny ny kinova vaovao amin'ny fizarana Linux Vahaolana 4.1, izay miaraka amin'ny fanatsarana isan-karazany ny rafitra, ho an'ny birao sy ho an'ny fampiharana sasany. Ho an'ireo izay tsy mahalala momba an'i Solus dia tokony ho fantatr'izy ireo izany distro dia tsy mifototra amin'ny fonosana amin'ny fizarana hafa ary izany koa dia mamolavola ny biraony manokana antsoina hoe "Budgie", ary koa ny mpampiditra azy, mpitantana fonosana ary configurator.
Ny fizarana manaraka ny maodely fampandrosoana hybrid, arakaraka izay famoahana lehibe dia avoaka manome teknolojia vaovao sy fanatsarana lehibe ary eo anelanelan'ny famoahana lehibe.
1 Momba an'i Solus
2 Vaovao lehibe Solus 4.1
Momba an'i Solus
Mitantana fonosana, mampiasa mpitantana fonosana eopkg (Pardus Linux PiSi fork), izay manome ny fitaovana mahazatra amin'ny fametrahana, manala fonosana, mikaroka ny toerana anaovana azy ary mitantana trano fitahirizana.
Ny fonosana dia azo zahana ho singa misy temotra, izay miforona sokajy sy sokajy hafa. Ohatra, ny sarintanin'i Firefox mankany amin'ny tambajotran'ny network.web.browser, izay tafiditra ao anatin'ny sokajin'ny rindranasa tambajotra sy sokajy zana-tsokajy ho an'ny tranonkala. Maherin'ny 2000 ny fonosana atolotra amin'ny fametrahana ao amin'ny trano fitahirizana.
Ny birao Budgie dia mifototra amin'ny teknolojia Gnome, fa mampiasa ny fampiharana Gnome Shell, tontonana, applet ary ny rafitra fampandrenesana azy manokana.
Mitantana fitaratra, Budgie dia mampiasa Budgie Window Manager (BWM), fanovana mandroso ny plugin Mutter base.
Ny fototry ny Budgie dia tontonana mitovy amin'ny fandaminana asa amin'ny takelaka birao mahazatra izay applet ny tontonana rehetra, ahafahanao manamboatra endrika mora foana, manova ny toerana ary manolo ny fampiharana ireo singa ao amin'ny tontonana lehibe araka ny itiavanao azy.
Vaovao lehibe Solus 4.1
Ao amin'ity kinova vaovao an'ny rafitra ity, Ny kernel Linux dia novaina ho amin'ny andiany 5.4, kinova miaraka amin'izany omena fanampiana ho an'ny fitaovana vaovao mifototra amin'ny AMD Raven 3 3600 / 3900X, Intel Comet Lake, chips an'ny Ice Lake.
raha mbola ny stack graphics dia nafindra tany Mesa 19.3 miaraka amin'ny fanohanan'ny OpenGL 4.6 ary ny AMD Radeon RX (5700 / 5700XT) vaovao ary ny NVIDIA RTX (2080Ti) GPUs.
Amin'ny sary ISO, ny algorithm zstd (Zstandard) dia ampiasaina haneriterena ny atin'ny SquashFS, izay ampitahaina amin'ny algorithm "xz" avela hanafaingana ny asa famongorana 3-4 heny, amin'ny sandan'ny fiakarana kely amin'ny habeny.
Ny fiovana iray hafa dia izany ny fikirakirana fizarana dia nohamarinina hampiasa ny mekanisma "esync" (Eventfd Synchronization) ao amin'ny Wine, izay ahafahanao mampitombo ny fahombiazan'ny lalao Windows sy ny fampiharana Windows.
Ny singa aa-lsm-hook tompon'andraikitra amin'ny fananganana profil ho an'ny AppArmor dia soratana ao amin'ny Go. Ny famerenana indray dia nanamora ny fitazonana ny kaody kaody aa-lsm-hook ary manome fanampiana ho an'ny kinova vaovao an'ny AppArmor, izay nanovana ny toerana lahatahiry misy cache profil.
Amin'ny ampahany amin'ireo singa ao amin'ny rafitra, azontsika atao ny mahita ireo kinova fanavaozana ireo programa, ao anatin'izany systemd 244 (miaraka amin'ny fanohanan'ny DNS-over-TLS ao amin'ny systemd voavaha), NetworkManager 1.22.4, wpa_supplicant 2.9, ffmpeg 4.2.2, gstreamer, 1.16.2, Firefox 72.0.2, LibreOffice 6.3. 4.2, Thunderbird 68.4.1.
Eo amin'ny lafiny mozikaa, ao amin'ny fanontana miaraka amin'ireo birao Budgie, Gnome ary Mate, mpilalao Rhythmbox no aroso miaraka amin'ny fanitarana Alternate Toolbar, izay manolotra fantsom-pifandraisana azo ampiharina amin'ny alàlan'ny haingon-trano eo am-baravarankely (CSD).
Ho an'ny filalaovana horonantsary ao ny fanontana ny Budgie sy Gnome, tonga GNOME MPV ary ao amin'ny MATE VLC no aroso. Raha ao amin'ny fanontana KDE, Elisa dia afaka milalao mozika sy SMPlayer ho an'ny horonan-tsary.
Amin'ny lafiny tontolon'ny birao, amin'ny tranga Budgie dia novaina ho amin'ny version 10.5.1, eo ambony latabatra Gnome dia nohavaozina amin'ny kinova 3.34, ao amin'ny tontolon'ny birao MATE dia nohavaozina amin'ny kinova 1.22.
Ary farany niditra Ny KDE Plasma dia navaozina ho ny kinova an'ny Desktop Desktop KDE 5.17.5, Framework Framework 5.66, Applications KDE 19.12.1 ary Qt 5.13.2.
Amin'ity kinova ity, ny tontolo iainana dia mampiasa ny lohahevitra famolavolana Solus Dark Theme azy manokana, novaina ny toerana misy ireo widgets ao anaty fitoeram-panjakana, nohavaozina ny applet famantaranandro, nahena ny lisitr'ireo lahatahiry azo adika ao Baloo, alefa amin'ny alàlan'ny default ao Kwin ary ny fanohanana ny birao tsindry iray dia alefa amin'ny alàlan'ny default.
Finalmente raha te hahazo ny sarin'ny rafitra ianao vitanao io avy amin'ny rohy etsy ambany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Tanisao ny kinova Solus 4.1 vaovao miaraka amin'i Kernel 5.4 sy maro hafa
Ny kafe manampy dia hoy izy:
Distro lehibe izay nanamarika ny volavolan'ny computing-ko nandritra ny volana vitsivitsy. Miarahaba anao noho ny famotsorana izay natolotr'ity distro ity.
Valio ny kafe manampy
FSF nandefa fanangonan-tsonia ho an'ny Microsoft hanokatra kaody Windows 7